Ngaba amayeza aphelelwe lixesha akhuselekile ukuba angawathathwa? | Uvavanyo - Ulwazi Lweziyobisi | Eyenkanga 2021
Ekuhlaleni Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Imidlalo Enzima Imidlalo Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Izilwanyana Zasekhaya Iindaba Impilo-Ntle Ulwazi Lweziyobisi Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo, Iindaba Ukuphuma Uluntu, Impilo Inkampani, Ukuphuma
Eyona >> Ulwazi Lweziyobisi >> Ngaba amayeza aphelelwe lixesha akhuselekile ukuba angawathathwa?
Ngaba amayeza aphelelwe lixesha akhuselekile ukuba angawathathwa?
Kwenzeka kuye wonke umntu-unentloko okanye uziva ugula, kwaye uye kwikhabhinethi yamayeza ukuze ufumane into yokunceda. Kodwa wakuba nje ufike wakhupha la mayeza amiselweyo okanye amayeza e-counter-counter, uyabona ukuba umhla wokuphelelwa uphelile. Ke ngoku wenzantoni? Yithathe okanye uyilahle? Yifowuni yokugweba ukuba, ngokuxhomekeke kunyango, inokuba neziphumo ezibi.
Ithetha ntoni umhla wokuphelelwa sisiyobisi?
Onke amayeza, nokuba ngugqirha okanye une-counter, uphelelwa ngumhla. Kwaye ngokufana nokuphela komhla ekutyeni, ukuba uyangena emva kwalo mhla, iziphumo zinokuba zincinci. Ukuthetha ngokwenzululwazi, utshilo uReed Supe, uFarm.D., Usokhemesti eAlaska, umhla wokuphelelwa sisiyobisi kuxa isithako esisebenzayo siphulukene ne-10% yamandla ayo. Leyo mihla inokuba yinto egcinayo, nangona kunjalo, kuba yenzelwe ukuqinisekisa ukuba imveliso yamachiza isebenza ngokupheleleyo kwaye ikhuselekile ukuyisebenzisa kubomi bayo bonke beshelf. Emva kwalo mhla, izinto zemichiza zamachiza zinokutshintsha ngeendlela ezingalindelekanga, zinike ukuba ichiza lingasetyenziswa.
Lisa Vogel, Pharm.D., Usokhemesti osebenza kwisibhedlele eIllinois, uphawula ukuba izibhedlele azisoze zinike amayeza aphelelwe lixesha, nokuba kuyiyure edlulileyo kumhla kunye nexesha elidweliswe kwichiza.
Xa sidibanisa into, inomhla 'ongaphaya kokusebenzisa', kwaye lowo ngumhla kunye nexesha elithile kwichiza elithile, utshilo. Ezo zikhokelo ezingqongqo.
Ekhaya, nangona kunjalo, le meko iya isiba nzima ngakumbi. UCarl Rauch, RPh, usokhemesti eWisconsin, uthi angaze athathe nantoni na ephelelwe lixesha- amandla kunye nokhuseleko ayinakuchazwa emva komhla, utshilo, kwaye ingakumbi ngamayeza okunyanga, iziphumo ebezingalindelekanga zinokuba mbi ngakumbi njengoko amandla apheleleyo esihla .
Ungalithatha ixesha elingakanani iyeza emva komhla wokuphelelwa lixesha?
UGqr. I-Vogel kunye ne-Supe iyavuma ukuba kulungile ukuba ungathathi nasiphi na isiyobisi esithengiswayo esiphelelwe lixesha, nangona bobabini besithi sebenzisa esona sigwebo sakho sigqibeleleyo ukuba unesitokhwe se-meds. Iveki okanye inyanga, okanye kude kube ngunyaka, emva komhla wokuphelelwa kwayo ngekhe ikwenzakalise, iyeza liza kusebenza kancinci. Kungenxa yokuba ixesha lokuphelelwa lixesha lidlulile, oko akuthethi ukuba iyeza alisebenzi kwangoko-kodwa loo nto yahlukile kuwo onke amayeza.
Ukuqhekeka kwemolekyuli akulunganga kwaye akufani ukusuka kwimolekyuli ukuya kwimolekyuli, utshilo uGqirha Supe. Ke ngoko, akukho ngxelo ngengubo yokuba xa into iphelelwe lixesha kakhulu.
Oko bekutshiwo, iqela lophando lisenokuba lifumene ulwazi ukuze lixoxe ngemihla yokuphelelwa. Kwi ukufundwa kwamayeza angama-14 angavulwanga Zonke ezo beziphakathi kweminyaka engama-28 nengama-40 ziphelelwe lixesha, abaphandi bafumanise ukuba ama-86% agcinwe ubuncinci ama-90% amayeza asebenzayo. Okwangoku, nangona kunjalo, ngenxa yokuba ezi ziphumo azinakuqinisekiswa ngamayeza asele evuliwe okanye agcinwe kwiimeko ezingaphantsi kokufanelekileyo, iU.S.Ukutya noLawulo lweeDrug (i-FDA) ayixhasi ukuthatha iziyobisi eziphelelwe lixesha.
Ngaba kukhuselekile ukuthatha amayeza aphelelwe lixesha?
Nokuba kukhuselekile ukuthatha into ephelelwe lixesha kuxhomekeke kwinto eyiyo. Onke amayeza abudala ngokwahlukileyo. Amayeza okunyanga umzimba, ukunciphisa iintlungu (njenge ibuprofen okanye acetaminophen ), Kwaye amayeza abandayo ngekhe akwenzakalise. Kulumkele ukuthatha ii-antibiotics eziphelelwe lixesha, izongezo kunye namaconsi wamehlo.
Inyaniso, akufuneki ube naziphi na ii-antibiotics eziphelelwa lixesha kuwe. Imigqaliselo kufuneka ihlale ithathwa ngokuzeleyo kuphela ukubonisa ukuba imiselwe ntoni-ukuba awuyenzi, utshilo uGqirha Vogel, unokuba mbi ngakumbi okanye ubeke emngciphekweni wosulelo lwakho olukhula ngokuchasene ne-antibiotic. Ngapha koko, ukwakheka okusisiseko kweentsholongwane ngokutshintsha kwexesha, kunokubangela imiba iyodwa. Ezinye i-antibiotics ziba yingozi ngaphambi komhla wokuphela kwaye zibangele ingozi, kusho uRauch. Abanye baphulukana namandla abo kwaye abanampembelelo incinci okanye abanafuthe kwiziphumo ebezingalindelekanga.
Okanye, ukuba ngaba unyango olusindisa ubomi-njenge initroglycerin -Inokusebenza ukuba awunazo ezinye iindlela onokukhetha kuzo, kodwa ngaba kufanelekile ukuba ube semngciphekweni? Mhlawumbi akunjalo.
Kwenzeka ntoni ukuba uthatha amayeza aphelelwe lixesha?
Uninzi lwamayeza e-OTC, ukusebenzisa amayeza aphelelwe lixesha kuya kukunceda okanye kungabinampembelelo-iyeza alisenakuba namandla. Iziphumo ebezingalindelekanga zinokubonakala ngakumbi, kodwa ngekhe ugule kunokuba ubusele, ingakumbi ukuba ugcinile amayeza akho ngokufanelekileyo, kwizikhongozeli zawo zoqobo. Izinto ezininzi zinokuwathoba amayeza ngokukhawuleza kunesiqhelo: ukukhanya elangeni, ubushushu kunye nokufuma.
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, ikhabhathi yamayeza ayisiyondawo ifanelekileyo yokugcina iipilisi. Igumbi lokuhlambela lishushu kakhulu kwaye linomphunga wokugcina ngokufanelekileyo amayeza. Uya kufuna ukufumana indawo epholileyo, emnyama, eyomileyo, ngaphandle kokufikelela kwabantwana. Amanye amayeza afuna ifriji kunye nolawulo olukhethekileyo, utshilo uGqirha Supe, ke qiniseka ukuba ulandela umkhombandlela wephakheji ngononophelo. Ukuba ucwangcisa ukubeka iipilisi kwibhokisi yeepilisi, fumana enye enombala, engacacanga, ukuzigcina ekukhanyeni ngokuthe ngqo.
Kufuneka uqwalasele umthombo wamayeza. Ukuthenga amayeza kwi-intanethi okanye kwilizwe langaphandle ayisiyonto ikhuselekileyo, utshilo uGqirha Supe. Akukho mzimba ulawulayo uqinisekisa ukuba amayeza yile nto ayithethayo kwaye ikhuselekile ukuba ingasetyenziswa. Zininzi iimeko apho abantu bathenga amayeza kwi-Intanethi belinye ilizwe ngenxa yeendleko kwaye iqulethe ityhefu yempuku kwaye akukho mkhondo wezithako ezisebenzayo ezibanga ukuba zinazo. Ngamanye amagama, amayeza avela ngaphandle kwe-United States anokungakhuseleki nangaphambi kokuba aphelelwe lixesha.
Ngawaphi amayeza angakhuselekanga emva komhla wokuphelelwa?
Amanye amayeza ayisebenzi emva kokuphela kwawo. Ezinye, ezinje, ziyingozi.
Itetracycline kwaye mzantsiweb : Ezi zintsholongwane zibayingozi ekuhambeni kwexesha, utshilo uRauch. I-Tetracycline iyaziwa ngokukodwa ukuba ibangela ukonzakala kwezintso emva komhla wokusetyenziswa.
Izibonelelo : Oku akulawulwa kunye nonyango oluvunyiweyo lwe-FDA, utshilo uGqirha Supe, ke khuseleka ngakumbi kunosizi kwaye uphephe ukuwathatha ukuba aphelelwe lixesha.
Ukuhla kwamehlo: Ukuphela kwamehlo kuphulukene ne-pH yabo eseleyo kwaye banokugqibela ngokutsha ngamehlo, utshilo uGqirha Supe.
Amachiza afakiweyo / IV : Oku ikakhulu kukuxhalabisa ezibhedlele, kodwa uGqirha Vogel uthi abaguli abasoze bafumane iyeza eliphelelwe lixesha kwiziko lonyango.
Kufuneka wenze ntoni ngamayeza aphelelwe lixesha?
Mandulo, isikhokelo sokuphelisa amayeza aphelelwe lixesha khange kusoloko kukho elona cebo lilungileyo.
Ndikhumbula xa ingcebiso yayikukugungxula amayeza aphelelwe lixesha, utshilo uGqirha Vogel.Ewe kunjalo, siyazi ngoku ukuba ngumbono ombi-unokungena emanzini. Eyona nto intle ukuyenza, utshilo uGqirha Vogel, kukubeka amayeza ngendlela apho abantu bengenako ukuyifaka, ngenjongo okanye ngempazamo. Ukuba sisiqwenga, sivule kwaye ulahle imixholo enkunkumeni. Ukuba yicwecwe, lixube nodaka okanye enye into engathandekiyo kwaye uyilahle. Ngee-antibiotics ezingamanzi, zigalele kwi-cat litter okanye kwiindawo zekhofi ukuze ixutywe, uze uyiphose.
Ukuba awufuni kulahla iyeza eliphelelwe lixesha kwinkunkuma yakho, ungasebenzisa inkqubo yokubuyisela umva. Iiholo ezininzi zedolophu, amasebe amapolisa, kunye namasebe omlilo athatha amayeza angafunekiyo, utshilo uRauch. Kuhlala kungekho mrhumo ngokwenza oku. Susa nje nayiphi na ingcaciso eyimfihlo ngaphambi kokuyizisa apho.
U-Supe ukwaphawula ukuba izixeko kwilizwe liphela zibamba iziyobisi ezibini zithatha iintsuku, nto leyo inokukhetha ukuba izibhedlele okanye izikhululo zamapolisa ezikufuphi kuwe azinazo iindawo zokulahla. Ulawulo lokuNyanzeliswa kweziyobisi e-US (i-DEA) luqhuba unyaka nonyaka Umthetho kaZwelonke wokuSebenzisa iziyobisi uthathe uMhla wokubuya , kananjalo.
Ezinxulumene: Indlela yokulahla amayeza angasetyenziswanga
Ukuphelisa amayeza aphelelwe lixesha yinto ebalulekileyo ekufuneka uyenzile, utsho uVogel. Andicingi ukugcina izinto macala onke kuba usenokufuna ingcinga elungileyo. Awufuni ukungena kwingqondo yokuba kulungile ukuthatha amayeza aphelelwe lixesha. Imihla ikhona ngesizathu.
Ekugqibeleni, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba loo mihla yokuphela kweziyobisi-nokuba zingahle okanye zingabi njani-zisebenzela injongo kwaye kufuneka uzithobele.
Yintoni enokuyenza ugqirha wakho (kwaye engenakho) ukuyitshisa kakubi ilanga
Yintoni iSymbicort kwaye isetyenziselwa ntoni?
Izibalo ze-ADHD 2021
Ngaba ukusebenza kunokunceda i-thyroid engasebenzi?
I-Paxil vs.Zoloft: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
INucynta vs. oxycodone: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Paxil vs.Prozac: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
Ngaba ufuna isikhuthazi semasisi?
I-9 yeeBhari zokuSasaza eziBalaseleyo kwiBondage: Isikhokelo somthengi wakho
I-Tramadol vs. oxycodone: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
Yintoni omele uyazi malunga nokugonywa kwikhemesti
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-Spironolactone kunye nendlela yokuzikhusela
yimalini metformin ekufuneka ndiyithathile iipcos
iyeza elifanelekileyo lokubanda empumlweni kunye nokuxinana
Unyango lwasekhaya lwenzipho yefenisi esebenzayo ngokwenene
indlela yokulahla ngokufanelekileyo amayeza amadala
Ekuphela kwendlela yethutyana yolawulo lokuzalwa kwamadoda yile
Imfundo Yezempilo, Impilo
Inkampani, Imfundo Yezempilo
Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya
Copyright © Onke Amalungelo Agciniwe | covidografia.pt